Kuguma kweApple? Ini ndatoona iri bhaisikopo | IPhone nhau
Kuguma kweApple? Ini ndatoona iri bhaisikopo
Tiri munguva iyo kune nyanzvi dzakawanda dzinoisa pangozi kutora kristaro bhora uye kufanotaura kubudirira kana kukundikana kwechigadzirwa, kana kunyange kambani. Zvichienderana nekuti hapana anoziva chii, vanofanotaura kubudirira kana kukundikana kwechigadzirwa chitsva, uye dzimwe nguva nemhedzisiro yakananga mumasarudzo emabhodhi evatungamiriri kana kunyangwe mumutengo wekambani. Muenzaniso wekupedzisira watinawo mu "kujekeswa" Peter Thiel, uyo akafanotaura (sevamwe vakawanda kwemakore) kupera kweApple. Kana nyanzvi yakaita saThiel ikati, unofanirwa kuzvitenda, kana isu isu vanhu tinofunga, asi zvakafanotaurwa ndezvechokwadi zvakadii? Tichitora mukana wechiitiko chekuratidzwa kweiyo iPhone isu tichaenda kunotarisa fungidziro dzenyanzvi dzeiyo nguva isati yatanga nyowani yeApple.
1 Steve Ballmer, CEO weMicrosoft
2 TechCrunch, iyo yekubata skrini ichave isingabatsiri
3 Nokia: haina kuchinja nzira yedu yekufunga.
4 John Dvorak, mumwe akavhenekerwa
5 Peter Thiel, Apple ichafa munguva pfupi
Steve Ballmer, CEO weMicrosoft
Vhidhiyo iyi inoda kusvika pakuzivikanwa seiya kubva ku iPhone mharidzo. Steve Ballmer aive nei ipapo iyo CEO weMicrosoft, uye akabvunzwa nezve iyo nyowani smartphone iyo Apple ichangobva kuburitsa.
Iko hakuna mukana wekuti iyo iPhone iri kuzowana yakakosha musika mugove. Iyo inodhura smartphone, inodhura zvakanyanya. Apple inogona kuita mari yakawanda kubva mairi, asi kana ukatarisa mafoni emabhiriyoni e1300 anotengeswa gore rega rega, ini zvirinani ndive nesoftware yangu pa60-70% yadzo uye ndisina 2-3% , zvinova izvo Apple ingakwanise kuzadzikisa.
Iyo yazvino data yatinotaura nezvayo 11,5% chikamu chemusika cheiyo iPhone, nepo Windows Nhare yakanyura ne 0,4%.
TechCrunch, iyo yekubata skrini ichave isingabatsiri
Imwe yeakanyanya kukosha mawebhusaiti enguva mukati memunda wehunyanzvi akataura izvozvo iyo iPhone yakanga yabuda nguva yayo isati yakwana uye kuti iyo yekubata skrini yaisazoshanda zvachose.
Iyo chaiyo keyboard ichave inobatsira mukupindura maemail kana mameseji sefoni vhiri. Ngakurege kuva nemunhu anoshamisika kana chikamu chakakosha chevatengi ve iPhone vachizvidemba uye vodzokera kuBlackBerry yavo mushure mekuyedza kweawa kupindura maemail.
Ini ndinofunga pane zvishoma zvekuwedzera kune aya mazwi. Mamirioni avanhu haangopindure kumaemail kana mameseji, asi mamirioni emameseji akanyorwa paWhsatsApp kana Teregiramu, uye zviuru zvezvinyorwa pamapeji ewebhu zvakaita seTechCrunch zvakanyorwa kubva kuakavimbika mamaki.
Nokia: haina kuchinja nzira yedu yekufunga.
Nokia ndiyo yaigadzira nharembozha panguva iyoyo, uye CEO wayo panguva iyoyo aive Olli-Pekka Kallasvuo, uyo akatambira iPhone nekusakwana kwese.
Ini handifunge izvo izvo Apple zvangotiratidza zvichachinja kufunga kwedu nezve software uye bhizinesi modhi kwatiri.
Isu tese tinoziva kuti iyo chinzvimbo che "kusachinja pfungwa dzako" chairevei kuNokia zvisinei nekuti iwo musika pachawo nevashandisi vakazvida kwemakore. Yakatengwa neMicrosoft uye yakadzoserwa kune isina basa musika.
John Dvorak, mumwe akavhenekerwa
Nhoroondo izere nekujekeswa senge zvataurwa pamusoro apa Peter Thiel, uye chimwe cheanonyanya kuzivikanwa chiri John Dvorak, tech savvy, mutori wenhau uye podcaster uyo ari wechokwadi komputa uye gadget nyanzvi, asi izvo maererano nekufungidzira zvakaratidza pane kanopfuura kamwe chiitiko kuti zviri nani kugara pamba. Pakatangwa iyo iPhone, akati Apple yainonoka kuti ibudirire munyika ino.
Dambudziko apa nderekuti nepo Apple ichigona kutamba fashoni pamwe nechero imwe kambani, hapana humbowo hwekuti inogona kukurumidza zvakadaro. Aya mafoni anouya nekuenda nekukurumidza zvekuti kunze kwekunge Apple iine hafu gumi nemaviri akasiyana mafoni akagadzirira kuenda, foni yako, kunyangwe ikabudirira, ichave isiri yechinyakare mumwedzi mitatu.
Iko hakuna mukana wekuti Apple ichabudirira mune rakakwikwidza bhizinesi. Kunyangwe mune bhizinesi uko kwaive piyona akajeka senge ega makomputa, yafanirwa kukwikwidza neMicrosoft uye inongova ne5% yemugove wemusika.
Peter Thiel, Apple ichafa munguva pfupi
Mubvunzurudzo neWSJ, Peter Thiel (muzvinabhizimusi akavhiringidza PayPal uye uyo akaisa mari muFacebook pakutanga) anovimbisa izvozvo Zera raApple rasvika kumagumo, zvichibva pachokwadi chekuti musika we smartphone hauchisina shanduko inogona kuitika.
Yakasimbiswa. Isu tinoziva zvinoita se smartphone uye zvazvinoita. Haisi mhosva yaTim Cook, asi haisi nharaunda ichave iine humwe hunyanzvi.
Paunoverenga mazwi aya chinhu chekutanga chaunofunga nezvacho Nei yakanangidzirwa paApple, nekuti kana musika we smartphone watopfuura, saka mamwe makambani akaita seSamsung, HTC, LG… achapfuura zvakare zvakaipa. Asi kana tikamira kwenguva yakati rebei, chakakomba chishandiso chave shamwari yedu isingaparadzanisike, icho chatoita mabasa edu ese, tichisiya chakasiya chakasiiwa (uye chakashora) komputa yemunhu, chakatemerwa kushanduka futi? Ini ndinofunga handisini ndoga kupokana chirevo ichi. Asi inguva chete ndiyo ichataura kana isu tiri mune zvirevo zvemunhu akavhenekerwa senge vatakambotaura kare, kana kana ari iye zvechokwadi anonongedza ari pamberi penguva yake.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Kuguma kweApple? Ini ndatoona iri bhaisikopo
Ini handifunge kuti zvinoreva kuti Apple iri kuzonyangarika, asi zvinoreva izvo izvo vazhinji vedu tanga tichifunga kwenguva refu, uye ndiko kuti Apple yakamira. Ese ma "gadget" matsva aunogadzira hapana chimwe kunze kwekugadzirisa - restylings - vintage. Akarasa iyo "wow" yekubata kare kare. Yehunyanzvi. Kumaka nzira. Izvo zvakataurwa nenyanzvi pane yekutanga iphone, sezvo iine tsananguro zhinji, asi kwandiri ini chikuru kutya, kutya kwekuziva kuti izvo zvangoburitswa zvinoshandura nyika. Uye ivo vaizviziva, zvisinei nekuti vakataura zvakadii neimwe nzira. Hei, hazvisi nyore kuve mutungamiri wenyika mune tekinoroji uye hunyanzvi, hongu, uye kune kwakawanda uye kwakawanda kukwikwidza. Asi ini ndinofunga makore mashoma apfuura zvinoratidza kuti Apple yakarasikirwa nechido ichocho pakuita "ngano" zvinhu uye yaive yakanyanya kuda kuita l € y € nda.
Muunganidzwa wakanaka we gaffes, asi zvakaoma kugara wakakwirira kudaro kwenguva refu. S2
Alberto de mweya akadaro
pakafa mugadziri, hunyanzvi hwakafa, apple rinoda hushingi hwekugadzira pasina kutya kwekukurumidza
Pindura kuna Alberto De Moya
Maitiro Akabatikana, ndiyo app yevhiki paApp Store
Aya maratenzi anoratidza mashandiro anoita maAirPod neBluetooth yavo